amụma nzuzo | SActivator.com
sactivator.com anyị na-aghọta na nzuzo nke gị ozi dị mkpa. Ebe a bụ ozi na ihe ụdị nke onye ozi anyị na-enweta na-enweta mgbe ị na-eji 'sactivator.com'Nakwa otú anyị chebe gị ọmụma.
Ọ dịghị mgbe anyị na-ere gị ozi na ndị ọzọ.
Anyị na-eji-atọ ndị ọzọ Ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-eje ozi na mgbasa ozi mgbe ị gara na anyị website. The mgbasa ozi nwere ike ịnwe kuki nke nwere ike ga-eji na Ụlọ ọrụ mgbasa ozi mma ịghọta a esenowo si mmasị na-enyere ha aka iji gosipụta metụtara mgbasa ozi. Otú ọ dị, na kuki ahụ natara na mgbasa ozi na-anakọtara site na mgbasa ozi ụlọ ọrụ na anyị na-enweghị ohere na ozi. Ụlọ ọrụ ndị a nwere ike iji ozi (ọ bụghị gụnyere aha gị, address, adreesị ozi ịntanetị, ma ọ bụ nọmba ekwentị) banyere gị na-eleta ndị a na ndị ọzọ na weebụsaịtị iji nye mgbasa ozi banyere ngwaahịa na ọrụ ịmasị gị.
Anyị na-eji-atọ ndị ọzọ Ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-eje ozi na mgbasa ozi mgbe ị gara na anyị website. Ụlọ ọrụ ndị a nwere ike iji ozi (ọ bụghị gụnyere aha gị, address, ma ọ bụ adreesị ozi-e) banyere gị na-eleta ndị a na ndị ọzọ na weebụsaịtị iji nye mgbasa ozi banyere ngwaahịa na ọrụ ịmasị gị. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ozi ndị ọzọ gbasara omume a na ga-achọ ịmatakwu nhọrọ gị na mmekọrita·ọ bụghị inwe ihe ọmụma a na-eji ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Watch Video Ihe Nzuzo